Antalya သည် Monorail နှင့် Metro နှင့်တွေ့ဆုံမည် RayHaber
[19 / 10 / 2019] Imamoglu မှတင်ဒါဘူတာသို့ဒုတိယတုံ့ပြန်မှု - 'ငါ Istanbul ကိုယ်စားအရမ်းဒေါသထွက်မိပါတယ်'	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[19 / 10 / 2019] IMM သည် Haydarpasa Sirkeci မီးရထားဘူတာတွင်တင်ဒါတင်လိုက်သည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[19 / 10 / 2019] ရပ်တန့်သောမြေအောက်ရထားတွင် IMM အန္တရာယ်ကိုဖယ်ရှား	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[19 / 10 / 2019] Izmir တွင်ရထားမတော်တဆမှု! .. Freight Train Wagons ပြေးဆွဲသည်	35 Izmir
[18 / 10 / 2019] ပိုမိုဆူညံသောမြို့တော်အတွက်လက်မှတ်ထိုးခြင်း	06 တူရကီ
[18 / 10 / 2019] Ankara ရှိကျောင်းသားများအတွက်စာရင်းပေးသွင်းသူများအတွက် Discount Card ကာလ	06 တူရကီ
[18 / 10 / 2019] ဘီလာရုစ်မက်ထရိုအတွက်Eskişehirလက်မှတ်ထိုးခြင်း	26 Eskisehir
[18 / 10 / 2019] Bursa သည် akkanakkale ၏မြန်နှုန်းမြင့်ရထားအတွက်တစ်ခုတည်းသောမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်သည်။	16 Bursa
Homeတူရကီမြေထဲပင်လယ်ဒေသကြီး07 AntalyaAntalya, ထိုတစ်လိုင်းပြေးရထားနှင့်မြေအောက်ရထားနှင့်တွေ့ဆုံရန်ပါလိမ့်မယ်
07 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 07 Antalya, မြေထဲပင်လယ်ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, havaray, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Metro, တူရကီ 0
သူတို့ဆိပ်ကမ်းနှင့် Antalya တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာအကြား Antalyaspor အားကစားကွင်းတစ်လိုင်းပြေးရထားစီစဉ်ဖျော Cem Oguz, "ကျွန်တော်တို့ဟာရှိအရင်းအမြစ်များမြေအောက်ရထားအစီအစဉ်ကိုရှာတွေ့သည်အထိ Kundu အားကစားကွင်း၏ 16 ကီလိုမီတာအပိုင်းန်းကျင်လူး," ဟု၎င်းကပြောသည်။ Oguz, သူတို့-Hop ဟာ Off ဘတ်စ်ကားတွင်ဒါခေါ်နှစ်ခုထပ် Antalya-Hop မိတ်ဆက်ပေးချင်ခဲ့တယ်, သူကပြောသည်။
ဒေါက်တာ Cem Oguz
Antalya တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန်အကြံပေး, ANTEPE ဥက္ကဋ္ဌနှင့်မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာများ (ASCE) ဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်ဒေါက်တာ Cem Oguz, ASCE "Antalya အကြောင်းကိုအရာအားလုံး" ၏ Antalya ဌာနခွဲစကားပြောကျင်းပခဲ့တယ်။ သူတို့ကတစ်လိုင်းပြေးရထားနှင့်မြေအောက်ရထားမိတ်ဆက်ပေးမညျဖွစျကွောငျးသတငျးကောငျး, Tunektepe ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းခံရဖို့အစီရင်ခံနေစဉ်သူတို့လုပ်ဆောင်သည့်အလုပ်နှင့်မြှို့နယ်နှင့် ပတ်သက်. သင်တန်းသားများကိုအနာဂတ်လွှဲပြောင်း Oguz, Antalya ဘဝဖြုန်းပါလိမ့်မယ်အကြောင်းကြားခဲ့သည်။ ဗိသုကာတစ်နံပါတ်နှင့်အဖြစ်အရပ်ဖက်အင်ဂျင်နီယာANSİADနိုင်ငံတော်သမ္မတအလီ Akinci, JMO Antalya ဌာနခွဲဥက္ကဋ္ဌ Bayram အလီဆန်ကိုလူတွေ့မေးမြန်း, HAKMO ဥက္ကဋ္ဌ Ufuk Sonmez, သမ္မတဟောင်း Luqman နိုင်ငံတော်သမ္မတ Atasoy နှင့် ASMO Emrullah တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကောက်၏အခင်းအကျင်းအင်ဂျင်နီယာများကုန်သည်ကြီးများအသင်းလည်းတက်ရောက်ခဲ့သည်။
"BIG CITY ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ 5'NC လူဦးရေ"
2 Antalya, 426 20 ၏ 177 တထောင်သန်းမြို့သားတို့ကိုမျက်နှာပြင်ဧရိယာ၏တထောင်စတုရန်းမီတာ, 640 ကမ်းရိုးတန်းကီလိုမီတာ, 19 913 မြို့ရွာနှင့်ရပ်ကွက်ကြောင်းဒေါက်တာထောက်ပြခဲ့ကြ မော်တော်ယာဉ်နှင့်ဆိုင်ကယ်အရေအတွက်၏နံပါတ် xnumx'nc xnumx'nc အသုံးအနှုန်းများ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ Cem Oguz, လူဦးရေ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ xnumx'nc, ကြီးမြို့ကြီးများမှအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲငင်။ Antalya လူဦးရေရဲ့ Oguz ညွှန်ပြနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း5ကြမ်းပြင်အများကြီးပိုလွယ်စီမံခန့်ခွဲဖို့ကပြောသည်တိုးပွားစေပါသည်။4သန်းခရီးသွားဧည့်သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်, အ Oguz ၏ရည်ရွယ်ချက်များ2သန်းခရီးသွားဧည့်သည့်216 ကနေလူဦးရေအပေါ်လူကိုသန်းသန်းထုတ်ဖော်ပြောဆို, ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုပြန်ခေါ်မြို့ထဲမှာအပေါ်ကြီးမားတဲ့ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးဖြစ်ပါတယ်။
"Crazy စီမံကိန်း NO ANTALYA လို"
Antalya Oguz သူတို့ကအမှုကိုပြုခံရဖို့ကိုတွေ့ကပြောသည်သောအရာကို ပတ်သက်. ယောဂီများအတွက်အကောင်းတစ်ဦးအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည်, ထောက်ခံမှုပေးဖို့မြို့တော်ဝန် Muhittin အင်းဆက်ပိုးလိုအပ်ချက်ကဆိုသည်။ bug ရဲ့ဆောင်ပုဒ်မှ Oguz အာရုံကို '' ကျနော်တို့အတူတူလုပ် ' "ကျနော်တို့လာမယ့်အချိန်၌ဤဆောင်ပုဒ်ဖြည့်ဆည်းပါလိမ့်မယ်။ အတူတူ, ဘုံသည်ပညာကိုကျနော်တို့လက်ျာဖြေရှင်းချက်အတူတကွတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အများပြည်သူအရင်းအမြစ်များကိုသုံးနမရှိရင်ကျနော်တို့အများပြည်သူအကျိုးအတွက်စီမံကိန်းများအတွက် Antalya သွင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Antalya ကလိုအပ်ပါသည်။ အရူးစီမံကိန်းများအတွက် Antalya ရဲ့အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ပါဘူး။ ကလူကလူစည်းစိမ်ချမ်းသာအသက်ရှင်နိုင်ရှိရာမြို့တမြို့ဖြစ်မင်္ဂလာပါလိမ့်မယ် "ဟု၎င်းကပြောသည်။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြွေး6200 သန်း BILLION LIRA"
Oguz ယခု 2014 ရွေးကောက်ပွဲများနှင့်အတူနေထိုင်သည်ယင်းအက်ဥပဒေBütünşeh၏ reminiscent သည်မြို့ပြဤလျှောက်လွှာကိုကျေနပ်မှုမပေးကြောင်းထောက်ပြသည်။ "မြို့တော် 30 အလေးအနက်ကြွေးမြီဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးရှိသည်," Oguz, Antalya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်လည်းအကြွေးဘီလီယံကိုသန်း6200 ကြောင့်ပေါင်သတိပေးပြောခဲ့သည်။
အခြေခံအဆောက်အအုံစနစ်များ, Oguz သူအကြီးမားဆုံးတာဝန်ဤကိစ်စတှငျဒေသခံအစိုးရများမှကျရောက်ကြောင်းမျဉ်းသား, မြို့အစီအစဉ်ဆောက်လုပ်ထားနှင့်စီမံခန့်ခွဲမယ့်ကောင်းသောသင့်ကြောင်းပြောခဲ့သည်။ Oguz လမ်းတွင် "မြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အဓိကပြဿနာကဤသို့ဆို၏, မြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီစဉ်ဖို့ကောင်းသောအဓိကသွေးလွှတ်ကြောအကြီးမားဆုံးပြဿနာဖြစ်လာပါဘူး။ ရေသယံဇာတ, ရေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ရေကာတာရုံကောင်းသောတည်းဖြတ်ရေးလိုအပ်ပါတယ်။ သူနေဆဲ, Antalya အတွက် Manavgat ကနေသောက်ရေဖြစ်ပါတယ်သင်သည် Karacaoren မှဆောင်ကြဉ်းခဲ့တာလဲ ကျနော်တို့မြေအောက်ရေဆွေးနွေးခြင်းနေကြသည်။ သောက်သုံးရေလာမယ့်ကာလအတွက်အဖြေတစ်ခုလိုသည်။ ရဆေိုးစနစ်များအကြာတွင်ရေတွက်နေကြသည်။ မိုးရေဟာကြီးမားတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကကောင်းစွာစီမံခန့်ခွဲရမည်ဖြစ်သည်။ အစိုင်အခဲစွန့်ပစ်စီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းမွန်စွာပြုကြရပါမည်။ စွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးကွန်ယက်ကိုကောင်းစွာစီစဉ်ထားရပါမည်။ ပြင်ဆင်မှုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် ပတ်သက်. အမှုကိုပြုရပါမည်။ သူကဒီအချိန်အထိကောင်းသောကွံခဲ့သလား စဉ်းစားပါ "ဟုသူကဆိုသည်။
"ကျနော်တို့ကဒေသဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေး MODEL ထံမှသဘောပေါက်"
သူတို့ထဲကAntalyalılarစီစဉ်ထား, စနစ်တကျနဲ့ဝိသေသလက္ခဏာ Oguz ကြှနျုပျတို့သညျဤအိမျမိုးအောကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်းများဆောက်လုပ်ရန်မြို့တမြို့, "77 ဖန်တီးရန်တာဝန်ပေးခဲ့သောအလေးပေးပြောဆိုခဲ့သည်။ ကျနော်တို့လူနေမှုဘဝများနှင့်စံ၏အရည်အသွေးအဆင့်မြှင့်တင်ရန်စီစဉ်ထားသည်။ ကျနော်တို့ဘဝမှဒေသခံဖှံ့ဖွိုးတိုးမော်ဒယ်စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာ unsolved ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့စီစဉ်ထားပါ "ဟုသူကဆိုသည်။
"ANTALYA ငယ်တစ် CITY လိမ့်မည် ORGANIZATION"
Antalya သတိပြုဖို့လိုစီစဉ်ထားသင့်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုနှင့်အသစ်သောလယ်ပြင်၌ Oguz, Kepezaltıအတွင်း structuring ပါလိမ့်မည်အကောင်အထည်ဖော် - ပင်စည်ထဲတွင်မြို့ပြအသွင်ပြောင်းငါ့ကိုသတိပေးခဲ့သည်။ Oguz ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောပေါက်၏ 65 ရာခိုင်နှုန်းကိုလှည့်ပတ်သူကဆောက်လုပ်ရေးယခုနှစ် 1 အတွင်းပြီးစီးလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောသည်ဟုဆိုသည်။ အဲဒီမှာ Oguz ကြောင်းညွှန်ပြသည့်ရပ်ကွက်အတွင်းအတွက် Kepez ပြောင်းလဲခြင်းအတွက်တထောင် 70 19 အကြောင်းကိုဟက်တာဖြစ်လိမ့်မည် "အကြောင်းကို2တထောင်ကလူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ Kırcami 1500 ဟက်တာ။ Calkaya 1400 ဟက်တာ။ လူဦးရေရဲ့ဒေသများနှင့်တည်နေရာလျှောက်လွှာအသက်ရှင်လိမ့်မည်ကိုဖန်ဆင်းသော 400 Konyaaltı'ndaဟက်တာအတွက်။ Antalya embodiment မှသေးငယ်တဲ့ yl ။ ဤနေရာတွင်ဖြစ်ခြင်း၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းခြင်းမရှိဘဲအခြေခံအဆောက်အဦများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုကြီးမားတဲ့ပြဿနာတွေတတ်၏။ ကျနော်တို့ resolution ကို "ဖြန့်ချိခဲ့စေလိုပါတယ်။
Oguz Antalya, Kepez, Kepez Muratpaşaသူသည် 2017 တထောင်ဝန်းကျင်ဖွဲ့စည်းပုံကြောင်းထောက်ပြအတွက်ဒေတာအဆောက်အဦများ၏အဆိုအရလူတထောင် 290 125 ကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ အဆောက်အဦးယခုနှစ် xnumx ရဲ့ရာခိုင်နှုန်း 42 နှစ်စဉ် 15-31 ရာခိုင်နှုန်း 16, တစ်နှစ် 30 အဆိုပါ xnumx ရဲ့ရာခိုင်နှုန်းနှင့် Oguz 27 ဖို့ xnumx't များ၏စီးပွားရေးဘဝကိုဖြည့်စွက်ရန်ကြေညာအထက်နှစ်များတွင်ကြောင်းထောက်ပြ, "အရည်အသွေးကို Build ဒါ 30 '' ဖြစ်ပါသည် ဆင်းရဲသောသူကိုအခွအေနေ။ အလတ်စားနှင့်ကောင်းမွန်သောအခြေအနေတွင်ရှိရာခိုင်နှုန်း31 ရာခိုင်နှုန်း, "ဟုပြောသည်။
"မပါသော FOR Master Plan အချည်းနှီးပြုမိပါလိမ့်မည်"
မြို့ပြအသွင်ပြောင်း Oguz Point 2013 တထောင်ဟုအက်ဥပဒေဆောက်လုပ်ရေးကနေမြို့ပြအသွင်ပြောင်းအကျိုးကျေးဇူးပြုနေသည်နှင့်အတူ 10 လုပ်ခုနှစ်တွင်ဖျက်ဆီးနှင့်။ 160 တထောင် Oguz ၏အတိုင်းအတာပေးထားသောငြိမ်းချမ်းရေးအဆောက်အဦးမှတ်ပုံတင်စာရွက်စာတမ်းပြောနေကြပါတယ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး, 110 တထောင်ငြိမ်းချမ်းရေးအဆောက်အဦးရဲ့ဇုန်ကိုအသုံးပြုခြင်းကဆိုသည်။ Oguz ကငြိမ်သက်ခြင်း၏ဖှံ့ဖွိုးတိုးနှင့်အတူတိုက်ဆိုင်လာသောအခါ 160 တထောင်ကနေမြို့ပြအသွင်ပြောင်း, မြို့ပြသက်တမ်းတိုးဥပဒအကြိုးအဆောက်အဦး၏မျက်နှာစာပိတျဆို့နတေဲ့ကြောင်းထောက်ပြတော်မူလျှင်, မာစတာအစီအစဉ်ကိုအချည်းနှီးဖန်ဆင်းလိမ့်မည်ဟုသွန်ပြုပြီးတော့ကဆိုသည်။ Oguz, "ပိုက်ဆံအများကြီးကုန်ပါလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တစ်ဦးအစီအစဉ်ကိုလုပ်မပေးနိုငျအဖြစ်အလေ့အကျင့်ဘာမျှအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုရပ်တန့်လိမ့်မယ်" ဟုသူကပြောသည်။
ကျောက်မိုင်းနှင့် HES RESPONSE
Antalya ၏ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းမြို့တော်အင်ဂျင်နီယာများ၏ပံ့ပိုးမှုရှိနေသော်လည်း Oguz နှင့်ကျောက်ကြောကျကငျြး၏လိုင်စင်, မှားတဲ့ချောင်းပေါ် 8 HEPP ပြုမိကြောင်းထောက်ပြတယ်။ ဖျောပွမှားခဲ့ Oguz, ဖောင်ဒေးရှင်းလယ်ယာ, ယက်အာကာသ, မွို့၌ Citrus များအတွက်သင်္ချိုင်းနှင့်ကာကွယ်ထားဒေသများ, သူကဆက်ပြောသည်။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Coastal သူများရဲ့ကာကွယ်မှုလိုအပ်"
Antalya 6.5 ကီလိုမီတာ Kepez Oguz ကူးနိုင်ပါတယ်ကြောင့်မှုကြောင့်စီမံကိန်းမှဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါကမ်းရိုးတန်းတိုက်စားမှုမှသူ Bogacayi Kepez "ကျနော်တို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်အဲဒီကမ်းခြေ" ဟုအဆိုပါ4တစ်ကမ်းခြေနှင့်အတူ Lara ကမ်းခြေကီလိုမီတာကြောင်းထောက်ပြကမ်းခြေဆုံးရှုံး၏အန္တရာယ်ကပြောသည်။ Oguz, ဆိပ်ကမ်းအတွက် Lara ကမ်းခြေခရုဇ်မလိုအပ်ပါဟုသူကဆိုသည်။
"ကျနော်တို့လလောက် KONYAALTI Coast 8 12 သန်းပေါင်"
Oguz များအတွက် Lara သဲသောင်ပြင်ကမ်းခြေစီမံကိန်းအတွက်ပေါင် 254 သန်းပေါင် Bogacayi ကောင်းစွာစီမံကိန်းအတွက်သုံးစွဲနေသည်အစီရင်ခံ, 131 သုံးစွဲသန်းထောက်ပြသည်။ ပျော်စေ, Landscaping, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, လုံခြုံရေး, ထိုကဲ့သို့သောကုန်ကျစရိတ်အဖြစ်ပစ္စည်းများ, သန့်ရှင်းရေး, အစည်ပင်သာယာ Oguz တစ်လလျှင်သုံးစွဲပိုက်ဆံ 8 12 သန်းပေါင်မှKonyaaltıကမ်းခြေအစီရင်ခံကြောင်းမှုကိုအလေးအနက်။
တက္ကသိုလ်တို့အကြား MELTEM Interchange
မြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြဿနာများ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, လက်စွပ်လမ်းများ, အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတိုးတက်အောင်နှင့်ရွှေအသိဉာဏ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များကို Oguz နှင့်အတူဖြေရှင်းနိုင်ခြေရာခံ, သူတို့ကလူတိုင်းကိုက်ညီမယ့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ်ကိုပြင်ဆင်ဟုပြောသည်။ Oguz, အနောက်, မြောက်အဘိဓါန် West နှင့်မြောက်ပိုင်းလက်စွပ်လမ်း၏မြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အဓိကအလှူငွေစေလိမ့်မည်ဟုဖော်ပြထားသည်အဆိုပါယာဉ်အသွားအလာ beltway မှကယ်ဆယ်ရေးပေးခြင်း, သူကပြောသည်။ အလုပ် Interchange အဆိုပါUncalıညွှန်ပြ Duraliler, နယူးစက်မှုနဲ့ Oguz မကြာမီစတင်လိမ့်မည်ဟုသူတို့တက္ကသိုလ်အကြားတံတားအောက်ရှိဇာတ်စင် xnumx'nc ရထားလမ်းပြီးစီးရန်ရှိသည်များနှင့်လေပြေလမ်းဆုံပြုမိပါလိမ့်မည်အစီရင်ခံခဲ့သည်။ Oguz, Interchange Antalyaspor ၏လမ်းဆုံပိတ်လေပြေကြောင်းမှတ်ချက်ပြုပြီးနောက်။ Oguz သူတို့နည်းနည်းထိ, အမျိုးသားအချုပ်အခြာအာဏာလမ်းလုပ်ပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်နှင့်စက်ဘီးလမ်းကြောင်းဟာ Ataturk ရိပ်သာလမ်းမှာရှိတဲ့အစားထိုးလိမ့်မည်ဟုသူကဆိုသည်။
ရှိ၏တစ်လိုင်းပြေးရထားနှင့် Metro အစီအစဉ်
ဆိပ်ကမ်း Oguz သူတို့ကပျမ်းမျှအားကစားကွင်းအထိတစ်လိုင်းပြေးရထားစေရန်စီစဉ်ဖျော "ကျွန်တော်တို့ဟာရှိအရင်းအမြစ်များမြေအောက်ရထားအစီအစဉ်ကိုရှာတွေ့သည်အထိ Kundu အားကစားကွင်း၏ 16 ကီလိုမီတာအပိုင်းန်းကျင်လူး," ဟု၎င်းကပြောသည်။ Sarısuအတွက်နှင်းလျှောစီးဓာတ်လှေကားနှင့်အတူ Antalya Duden ရေတံခွန်ယိုဖိတ်မှုဧရိယာ၌-Hop ဟာ Off တွင်-Hop ကိုခေါ် Oguz, နှစ်ခု-နှစ်ထပ်ဘတ်စ်ကားမိတ်ဆက်ပေးလိမ့်မယ်ဟုသူကဆိုသည်။
သူတို့ 32 နူးညံ့ Oguz သတ်မှတ်ဖျက်သိမ်းဖြစ်ပါတယ်ပါဘူးသင့်ကြောင်းရွေးကောက်ပွဲစီမံကိန်းများ၏အချို့ထောက်ပြရှေ့မှာဆုံးဖြတ်ချက်ပြန်ခေါ်သူKınık Halim စီမံကိန်း၏ကြောင်း 505 သန်းပေါင်ထောက်ပြသည်။ အရှေ့ဘူတာနှင့်အဟောင်းအားကစားကွင်း၏ဧရိယာအတွင်းစီမံကိန်းများ, Oguz ရှုပ်ထွေးပြီးစီးရောကျခါနီးပွီဟုဆိုသည်ပြတိုက်သူဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့် ပတ်သက်. Ataturk မိုးလုံလေလုံအားကစားခန်းမကဆိုသည်။
"ဖြစ် Tunektepe OLD"
Tunektepe ပြောနေကြပါတယ် Oguz ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းရောက်စေဖို့အဟောင်း "Tunektepe ထဲသို့ပြန်လာကြ၏။ Rotary ကာစီနိုလောင်းကစားရုံယင်း၏ဟောင်းတဦးရဲ့အထောက်အထားမှပြန်လာပါလိမ့်မယ်။ အဆင်သင့်စီမံကိန်းများ။ အဆင်းလှသောလူနေမှုအာကာသဖွစျလိမျ့မညျပြည်သူ့သုံးပါလိမ့်မယ် "ဟုသူကပြောသည်။
Antalya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ပေးထားနှင့် Oguz ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 2029 သန်းပေါင်, "15 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းအသုံးမဝင်တော့ C-type ကိုလမျးလြှောကျသှားခွငျးဧရိယာ၏ D-type ကိုလမျးလြှောကျသှားခွငျးဧရိယာဖို့အကူးအပြောင်းမှုအတွက် protocol ကိုဒါပေမယ့်အတွက်3နှစ်ပေါင်း '' အချိန် protocol ၏သက်တမ်းတိုးမေ့လျော့သော။ ဤသို့ဖော်ပြသည်Sarısu3၏နှစ် သူကခွဲဝေအချိုးဝန်ကြီးဌာနနှင့်အတူ re-တင်ဒါလုပ်ငန်းစဉ်လိုသည်။ မြို့တော်ရှိတစ်ဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ ဒါဟာကို run ရန်လိုအပ်ပါသည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်လည်းတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ငါကဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ Sarısuကောင်စီအတွက်အပ်နှင်း "ဟု၎င်းကပြောသည်။
Oguz ချေးယခုအခါချွေတာဘို့အရင်းအမြစ်များ ", ထိုငွေစုအတွက်မြူနီစီပယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှအပေါ်လွန်ကြောင်းထောက်ပြသည်။ ယခုကြှနျုပျတို့ချွေတာပါတယ်။ မြို့ပတ်ရထားတစ်ဦးကအလေးအနက်ငွေစုထုတ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အများပြည်သူအကျိုးစီးပွားအတွက်, အနိမ့်ဆုံးကုန်ကျစရိတ်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူဤလုပ်ငန်းစဉ်စီမံကိန်းများဖြုန်းပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ညာဘက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်ပါ "ဟုသူကဆိုသည်။
ဒေါက်တာ Mustafa Balci အားဖြင့် IMO Antalya ဌာနခွဲကသမ္မတမိန့်ခွန်းပြီးနောက် Cem Oguz ပြားတင်ဆက်ခဲ့သည်။ အင်တာဗျူး, အုပ်စုတစ်စုဓာတ်ပုံကိုရိုက်ကူးနှင့်အတူအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ (Antalyasonhab ဖြစ်ပါသည်)
အစ္စတန်ဘူလ်တွင်နေထိုင်သူများ, အလုပ်လုပ်မှအဓိကအား Metrobus '' လျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကားနှင့်တွေ့ဆုံရန်ပါလိမ့်မယ် 23 / 09 / 2014 Istanbullites, 'အလုပ်ဖို့မာန်တင်း Metrobus လျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကားနှင့်တွေ့ဆုံရန်ပါလိမ့်မယ်: အစ္စတန်ဘူလ်လျှပ်စစ် Tramway နှင့်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း Enterprises (IETT) မှ General Manager အချိန်တိုအတွင်းအတွင်းအစ္စတန်ဘူလ်၏ Kahveci, ယုံကြည်သူတို့လျှပ်စစ်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရွေ့လျား start ကပြောပါတယ်, "2019 အတွက်ရေတပ်များ၏ 25 ရာခိုင်နှုန်းသာလျှပ်စစ်ဖွစျလိမျ့မညျ "သူကပြောသည်။ İETTတူရကီရှေးအကျဆုံးအဖွဲ့အစည်းများတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်သူတို့မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်အဓိကတိုက်ခိုက်သို့ ဝင်. , သူကပြောသည်။ သူတို့ဟာİETT Kahveci သပိတ်မှောက်ယာဉ်များ၎င်း၏ရေတပ်မနှစ်က2850 သစ်ကိုမော်တော်ယာဉ်စင်း, အများပြည်သူဘတ်စ်ကားနှင့် ပတ်သက်.3တထောင်၏အခြားအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသက်တမ်းတိုး၏တထောင်အဆကြောင့်သက်တမ်းတိုးဖို့စတင်ခဲ့သူကဆိုသည်။ Kahveci, ယခုအချိန်တွင်အတွက် 360 CNG စင်းကို ...
Turel: "Antalya Metro နှင့်တွေ့ဆုံရန်ပါလိမ့်မယ်" 23 / 10 / 2017 ပထမဦးဆုံးအတွက် Antalya အတွက်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး Sinan ရပ်ကွက်အတွင်းနည်းစနစ်ကြောင့် ,, အခမ်းအနား, မြို့တော်ဝန် Menderes Turel မှာ Speaking Storey Car ကိုပန်းခြံ Antalya အကောင်အထည်ဖော် "2019 အစ္စတန်ဘူလ်မက်ထရိုနှင့်တွေ့ဆုံပါလိမ့်မယ်ပြီးနောက်," ဟု၎င်းကဆိုသည်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန် Turel သည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အသွားအလာပြဿနာများမှာ၏ဖြေရှင်းနည်းအဘို့ 2019 အစ္စတန်ဘူလ်မက်ထရိုနှင့်တွေ့ဆုံပါလိမ့်မယ်ပြီးနောက် "သတိပြုကြောင်းအဓိကအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမက်ထရိုကသမ္မတ Turel ။ ကျနော်တို့ကအကြောင်းခွင့်ပြုအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အများပြည်သူလက်ရှိသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Master Plan ကိုအောက်မှာလက်ခံရရှိခဲ့သည်နေကြသည်။ သငျသညျဘုရားသခငျသညျဝေမျှလိုလျှင်သက်ဆိုင်ရာအဆောက်အ relaunched သည် 2019 Lara ကနေရန်းဆိပ်ကမ်းပြီးနောက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ် Varsak'ta Y ကိုပုံဆွဲရန်မြေအောက်ရထားတိုးချဲ့ဖို့စီမံကိန်းအတွက်အပေါ် Kundu ။ ၎င်း၏ ...
Antalya အစာရှောင်ရထားတွေ့ဆုံမည် 14 / 10 / 2016 Antalya မြန်နှုန်းရထားတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးလိမ့်မည်: TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ Apaydin TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ "ကျနော်တို့တည်နေရာ, တိုင်းပြည်လူဦးရေရဲ့ xnumx ရဲ့ရာခိုင်နှုန်းကိုထက်ပိုပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်သည်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်း core ကိုကွန်ယက်သို့ရောက်လာသော" İsa Apaydınသူသည်ဆက်လက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းစီမံကိန်းအား "လူဦးရေရဲ့ xnumx ရဲ့ရာခိုင်နှုန်းကိုထက်ပိုပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင် high-speed ကိုရထားလမ်း core ကိုကွန်ရက်တည်နေရာလာလိမ့်မည်။ " ဟုဆိုသည် သူကပြောပါတယ်။ Apaydin, 50 ။ Karabükအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမီးရထားစနစ်အင်ဂျင်နီယာစာတမ်းဖတ်ပွဲအရင်းအမြစ်များကိုခွဲဝေချထားပေးရန်ဖို့ရထားလမ်းကဏ္ဍတွင်ကျော်ဘီလီယံကိုပေါင်, သတင်းထောက်များကိုရန်သူ၏ကြေညာချက်တွင်ရန်အစိုးရရဲ့တစ်နှစ်-to-date ဖြစ်အောင်32003 သို့ရောက်လာသည်ကား, သူကပြောသည်။ အားလုံးနီးပါးနိုင်ငံများတွင်အဆိုပါ ", ရထားလမ်း Apaydin ၏ 50 တထောင်ကီလိုမီတာ၏သက်တမ်းတိုးကြောင်းဖော်ပြထား ...
İZBANသက်သာခြင်းနှင့်တွေ့ဆုံရန် Selcuk လူတွေဒီနှစ် 07 / 04 / 2017 လူများ Selcuk İZBANနှစ်သိမ့်သည်ယခုနှစ်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးလိမ့်မည်: လူအမျိုးမျိုးတို့၏ထောက်ခံမှုမှပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Ahmet Arslan, အစိုးရအိမ်မှာ Selcuk groundbreaking အခမ်းအနားအဓိကစီမံကိန်းများကိုကျေးဇူးတင်စကားသူတို့အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ တူရကီ, နေ့တိုင်းမှော်, ပို့ဆောင်ရေး, သင်္ဘောများနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားလမ်းနှင့်တကွ, အပိုင်းပိုင်းခွဲအဝေးပြေးလမ်းမကြီးအဖြစ်တိုင်းပြည်၏န်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေး၏ "ဖှဲ့ဇာ" ၌ရှိသမျှသောအရပျရှိပါတယျလေဆိပ်သည် Arslan သာဆိပ်ကမ်းနှင့်အတူဥပမာသတိပေး, စီးပွားရေး၏အစစ်အမှန်ပိုင်ရှင်များနေစဉ်လူမြိုးတစျမြိုးကပြောသည်။ Arslan, Izmir အတူခှဲဝေလမ်းမကြီးဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကိုဖွင့်မှသကဲ့သို့သူတို့ဆောက်သောထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ Menemen-Aliaga-Çandarlıကားလမ်းအမ်းစထရောင်းအခြေခံဝန်ကြီးချုပ် Binali Yildirim ညွှန်ကြားချက်မှာပြန်ပြောပြ ...
Kütahya 2017 အဆိုပါ YHT နှင့်တွေ့ဆုံရန်ပါလိမ့်မယ် 13 / 01 / 2013 Kütahya YHT လိုင်း 2017 Kütahyaလက်ထောက် Hasan Fehmi Kinay ရှိသည်လိမ့်မယ်, အမြင့်မြန်နှုန်းရထား (YHT) လိုင်းအလုပ် xnumx't စတင်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားKütahya 2014 Kütahyaလက်ထောက် Hasan Fehmi Kinay, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့်အတူစေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်ဟုပြောသည်ပါလိမ့်မယ် သူတို့လုပ်နေတာနှင့်စီမံကိန်းနှောင်းပိုင်းတွင်KütahyaEskişehir-အစ္စတန်ဘူလ်လိုင်းဤညှိနှိုင်းမှုရလဒ်အတွက်ကြေငြာခဲ့သည်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောနေကြသည်။ Eskisehir-အစ္စတန်ဘူလ်လိုင်းစီမံကိန်းကိုပြီးပြည့်စုံသည်နှင့်အ sequence ကိုအတွက်ဘတ်ဂျက် Kinay ၏ခွင့်ပြုချက် "ကျနော်တို့ Eskisehir-Afyon လိုင်း၏ပြီးစီးဘို့စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်ဟုမှတ်ချက်ချသည်။ အဓိကအားကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ်မှတ်Kütahyaအပါအဝင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်နယ်ဒေသများနှင့်အတူလေဆိပ်မှအောင်ပွဲ YHT link ကိုသေချာစေရန်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းခဏအကြာ, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန, အောင်များအတွက် တိုးတက်မှုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်တာဗျူး ... ။
Metrobus Metrobus Halıcıoğluများပြား,3ဒဏ်ရာရခဲ့
install လုပ်ဖို့မတော်တဆမှု "အစောပိုင်းသတိပေးစနစ်" ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ Tools များမှ Metrobus
ရပ်တန့်သောမြေအောက်ရထားတွင် IMM အန္တရာယ်ကိုဖယ်ရှား
Izmir တွင်ရထားမတော်တဆမှု! .. Freight Train Wagons ပြေးဆွဲသည်
KARDEMİRသည် Soldier Salute အသစ်ဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသစ်များကိုစတင်ခဲ့သည်
Ankara ရှိကျောင်းသားများအတွက်စာရင်းပေးသွင်းသူများအတွက် Discount Card ကာလ
Bursa သည် akkanakkale ၏မြန်နှုန်းမြင့်ရထားအတွက်တစ်ခုတည်းသောမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်သည်။
ဘယ်အချိန်မှာ Derbent ရထားဘူတာဖွင့်မလဲ?
Kayaş-Sincan Başkentrayလိုင်းသည် 18.4 Km ကိုတိုးချဲ့သည်
မြို့တော်ဝန်ယူစီသည်ရထားလမ်းများကို Sakarya သို့သယ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်သမိုင်းကိုသွားလိုသည်
Konya Metropolitan မှအံ့အားသင့်ဖွယ်စာအုပ်ကိုစာအုပ်ယူပါ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: မီးသတ် Service ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည် (TÜVASAŞ)
အစ္စတန်ဘူလ်တွင်နေထိုင်သူများ, အလုပ်လုပ်မှအဓိကအား Metrobus '' လျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကားနှင့်တွေ့ဆုံရန်ပါလိမ့်မယ်
Turel: "Antalya Metro နှင့်တွေ့ဆုံရန်ပါလိမ့်မယ်"
İZBANသက်သာခြင်းနှင့်တွေ့ဆုံရန် Selcuk လူတွေဒီနှစ်
Kütahya 2017 အဆိုပါ YHT နှင့်တွေ့ဆုံရန်ပါလိမ့်မယ်
သူတို့အား Vatm အတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့လေ့ကငျြ့ဖို့ Antalya သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc ကို Antray
သူဟာ Bursa ရထားလမ်းနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်တစ် pir တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး
ခရီးသွားလုပ်ငန်း Doping Effect Make ဖို့သံ Antalya တွေ့ဆုံမှတဆင့်ဒီလိုမြင်ကွင်း
channel စီမံကိန်းကို Antalya မှာစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်
Antalya, 2018 အတွက်သိသာထင်ရှားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသက်သေခံပါလိမ့်မယ်
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ အောက်တိုဘာလ 2019 (354) စက်တင်ဘာလ 2019 (555) သြဂုတ်လ 2019 (508) ဇူလိုင်လ 2019 (633) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (974) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)